Zithini iintlobo ezahlukeneyo zabagculeli?
Eyona Ukhuseleko Zithini iintlobo ezahlukeneyo zabaduni?
Zithini iintlobo ezahlukeneyo zabagculi? Ngaphandle kwenkolelo edumileyo, ayingabo bonke abagwenxa ababi. Kukho iintlobo ezininzi zabakhohlisi, kwaye kule post siza kuhamba ngayo.
Ngoobani abahlaseli ngoku kwaye zithini iinjongo zabo? Ewe, umntu obhuqayo ngumntu osebenzisa izakhono zekhompyuter kunye nolwazi ukufumana ukufikelela kwiinkqubo kunye neenethiwekhi.
Abagculeli banengqondo kunye nabantu abanezakhono abangena kwiinkqubo kunye nothungelwano ngeenjongo zokuba ulwazi okanye ukwenza uhlaselo olubi. Iinjongo zabo ziyahluka: abanye bayenzela ukonwaba, abanye benza ulwaphulo-mthetho.
Abagculi banokuhlelwa ngolu hlobo lulandelayo:
Urhulumente uxhase abahlaseli
Iminqwazi emnyama ngabagculeli abasebenzisa ulwazi kunye nezakhono zabo ukufumanisa nokuxhaphaza ukuba semngciphekweni wokhuselo ukuze bafumane imali okanye izizathu ezinobungozi. Imisebenzi yabo inokubangela umonakalo omkhulu kwiithagethi zabo nakwiinkqubo zabo. Iminqwazi emnyama ihlala ibandakanyeka kwizenzo zolwaphulo-mthetho ezinje ngokuba ulwazi lomntu kunye nezezimali okanye ukuvala iwebhusayithi kunye neenethiwekhi.
Iminqwazi emhlophe ngabagculi basebenzisa ulwazi nezakhono zabo ukuphucula ukhuseleko lwenkqubo ngokufumanisa ukuba semngciphekweni ngaphambi kokuba iminqwazi emnyama yenze. Basebenzisa kakhulu iindlela ezifanayo kunye nezixhobo ezenza iminqwazi emnyama, kodwa ngokungafani neminqwazi emnyama, iminqwazi emhlophe inemvume yomnini wenkqubo yokusebenzisa ezo ndlela.
Iminqwazi engwevu ngabagculeli abangabalulekanga njengeminqwazi emnyama, kodwa hayi njengeenqanawa ezimhlophe. Banokunceda iminqwazi emnyama kwimisebenzi yabo, kodwa banokunceda ekufumaneni ubungozi okanye ukujonga ukusikelwa umda kwenkqubo.
Abazingeli bokuzibulala bakulungele kwaye bazimisele ukwenza uhlaselo 'lwesizathu', nokuba bayabanjwa kwaye bayatshutshiswa.
Iikripthi zabantwana ngabagculeli abatsha ekuqhekezeni kwaye abanalo ulwazi oluninzi okanye izakhono zokwenza iihacks. Endaweni yokuba basebenzise izixhobo kunye nezikripthi eziphuhliswe ngabagculi abanamava ngakumbi.
Abanqolobi be-cyber bangabacuphi abachukunyiswa ziinkolelo ezithile okanye ezopolitiko. Basebenza ukubangela uloyiko kunye nokuphazamiseka kweenkqubo kunye neenethiwekhi.
Abaxhasi abaxhaswe ngurhulumente baqeshwa ngoorhulumente ukuze bafumane ukufikelela kulwazi olufihlakeleyo lwabanye oorhulumente.
AbaHacktivists bangena kurhulumente okanye kwiinkqubo zeshishini ngaphandle koqhanqalazo. Basebenzisa izakhono zabo ukukhuthaza i-ajenda yezopolitiko okanye yezentlalo. Iithagethi zihlala ziiarhente zikarhulumente okanye iinkampani ezinkulu.
i-nougat yemoto x ecocekileyo
isamsung galaxy tab s7 +
I-HTC One M9 vs Samsung Galaxy Qaphela 4
I-Galaxy Qaphela i-10 kunye ne-10 + zisemthethweni: amaxabiso, umhla wokukhutshwa, nazo zonke izinto ezintsha
I-Apple isungule ushicilelo olukhethekileyo 'lweQela leQela' iBeats Solo3 ii-headphone ezingenazingcingo
I-Google Pixel 2 vs Galaxy S8 vs LG G6 vs iPhone 8: iindlela ezine zokuthelekisa